प्रचण्ड–माधवसंग बहुमत रहेको ओलीको भनाई, नेकपाको सबै बैंक खाता रोक्का हुदै, अब के हुन्छ ? - नेपाली खोज
शुक्रबार, फाल्गुन १४, २०७७
प्रचण्ड–माधवसंग बहुमत रहेको ओलीको भनाई, नेकपाको सबै बैंक खाता रोक्का हुदै, अब के हुन्छ ?
बिहिबार, पुस १६, २०७७
काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको पक्षमा बहुमत रहेको स्वीकार गरेका छन् । बबरमहलस्थित कार्की ब्याङ्क्वेटमा आफ्नो समूहका सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यकर्ता सम्बोधन गर्दै ओलीले आफू अल्पमतमा रहेको स्वीकारेका हुन् ।
प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि एकपछि अर्को आरोप लगाउने क्रममा ओलीले बहुमतको दुरुपयोग भएको बताए । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बैंक खाता रोक्का गर्न आग्रह गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले बैंकहरुमा पत्राचार गरेका छन् ।
पार्टीभित्र विवाद रहेको र सम्पत्तिमा कसको हक लाग्ने भन्ने यकिन नभएको भन्दै उनीहरुले नेकपाको खाता रहेका बैंकहरुमा इमेलमार्फत पत्र पठाएका छन् । पुस १२ गतेको मिति उल्लेख भएको पत्र बुधबार बैंकहरुमा पुगेको छ । हेर्नुहोस पुस १६ गतेका मुख्य समाचारहरु :
मोटरसाइकल र अटो एकापसमा ठोक्किँदा एकको मृत्यु तीन घाइते
गोदावरिबाट ‘हिड्दा हिड्दै’ को सुटिङ्ग सुरु
खोलामा पुल बनेपछि दोभान बजारलाई भयो सास्ती
सरु र विनायकको ‘क्यारम तनी’ मा महानायकको अभिनय